पैसा तिरेर तुइन तर्न बाध्य छन् हुम्लाका स्थानीय ! – Khabarhouse
पैसा तिरेर तुइन तर्न बाध्य छन् हुम्लाका स्थानीय !
Khabar house | १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:२७ | Comments
जनक शाही, हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.सं.२०७२ साल असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको पहिलो निर्णय नै नेपालमा तुइन विस्थापित गर्ने थियो। उनले दुई वर्षपछि अर्थात् २०७४ असोज मसान्तसम्ममा सबै तुइनहरु विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले पटक–पटक जनतासामु सो प्रतिबद्धता दोहो¥याएका पनि थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालको सफलताबारे बोल्दा नेपालका सबै तुइनहरु विस्थापित भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भाषणमा तुइन विस्तापित भइसकेको भनेको कुरा सुन्नु भएकै होला। तर, यता हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा भने आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर तुइन तर्न बाध्य छन् स्थानीय ।
यति मात्र होइन, यहाँका स्थानीयले घाँस दाउरा समेत सोही तुइनमा ‘झुण्ड्यार नै वारपार गराउदै आएका छन् । स्थानीयहरुका लागि यो तुइन यति आवश्यक छ कि जोखिमपूर्ण तुइनबाट आवत÷गर्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक तुइन तरेको प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै सामग्री तारेबपत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पूरानो र धराप परेको तुइन कतिबेला चुँडिने हो र नदीमा खस्ने हो भर छैन ।
खार्पुनाथका अधिकांश वडाका बासिन्दाले गाउँपालिकाको केन्द्र याङ्चु पुग्न तुइन तर्नुको विकल्प छैन । खार्पुनाथबाट सदरमुकाम सिमकोट निकै टाढा पर्छ । त्यसैले दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा खाद्यान्न जुम्ला र बाजुराबाट ल्याउने गरिन्छ । सिमकोट जाने बाटो झनै अप्ठ्यारो भएकाले जोखिम मोलेरै भएपनि तुइनबाटै सामग्री वारपार गराउन स्थानीय बाध्य छन् ।
दैनिक २०० जना भन्दा बढीले वारपार गर्ने उक्त तुइनमा यात्रुका औंला काटिने र चोट लाग्ने घटना सामान्य जस्तै मानिन्छ । हुम्लाको मुस्याडी, बाक्चेगौडा र याङचु कुनामा ४ वर्ष अघिदेखि बर्षेनी झोलुङ्गे पुल बनाउने भन्दै लगातार सर्भे हुँदै आएको छ । तर, सर्भे बाहेक अन्य प्रगति भने हुन सकेको छैन ।